अज़ोरेस टापुहरूमा के हेर्ने - सपनाको यात्रा | Absolut यात्रा
तपाईं आफैलाई सोध्नुहोस् अझोरस टापुहरूमा के हेर्ने? त्यसोभए हामीसँग स्थानहरूका फारममा सब भन्दा राम्रो उत्तरहरू छन्। पछाडि छोड्न नसकिने पर्यटनको अर्को फोकस। यो करिब नौ पुर्तगाली टापुहरू हो र तिनीहरू एट्लान्टिक महासागरको बीचमा अवस्थित छन्। ती सबैमा केवल एउटा स्वायत्त क्षेत्र गठन हुन्छ, यद्यपि राजधानी तीन शहरहरू बीचमा विभाजित छ।
हुन सक्छ यो गर्नुहोस्, अझोरस टापुहरूमा के हेर्ने हो त्यसले हामीलाई एक ठाउँको नजिक ल्याउँदछ प्रकृति र परिदृश्य प्रमुख छन्। तर यसको अतिरिक्त, त्यहाँ थुप्रै अन्य कुनाहरू पनि छन् जुन हामी प्रत्येक चरणमा पत्ता लगाउन सक्छौं र आज हामी यही गर्छौं। के तपाईं हामीसंग आउदै हुनुहुन्छ?
1 अज़ोरेस टापुहरूमा के हेर्ने: मिरादौरो बो बोका इन्फर्नो
2 Caldeira Velha मा डुबकी लिनुहोस्
3 सान मिगुएलको केन्द्र
4 Carapacho तातो स्प्रिंग्स
5 Terceira टापु को राजधानी
6 इस्ला डे फ्लोरेसको झरना
7 फिएल टापुमा ज्वालामुखी
अज़ोरेस टापुहरूमा के हेर्ने: मिरादौरो बो बोका इन्फर्नो
यदि हामी मुख्य र सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको पोइन्ट्सबाट शुरू गर्छौं भने हामीले मिरादौरो दा बोका डो इन्फर्नोको बारेमा कुरा गर्नुपर्नेछ। यो सैन मिगुएल टापुमा छ, एक सबैभन्दा ठूलो र हामी केहि वातावरणको मज्जा लिन सक्छौं। यस मामलामा, हामी प्रकृति र ती भेरिगो दृश्यहरूसँग बाँकी छौं, जुन यसको लायक छन्। दृश्य दृष्टिकोण सुरक्षित क्षेत्र भित्र अवस्थित छ र करीव १००० मिटर अग्लो छ। यसबाट हामी तालमा Caldeira das Sete Cidades भनेर चिनिन्छौं। सबैभन्दा ठूलो ताल हो जुन दृश्यको फेदमा बस्दछ। रंगहरूको संयोजनले तपाईंको रेटिनामा शो छोड्नेछ।
Caldeira Velha मा डुबकी लिनुहोस्
उही ठाउँमा, हामी एक क्षेत्र फेला पार्छौं जहाँ ज्वालामुखी धेरै नजिक छ र यो केवल यस वरपरको क्षेत्र हो, जहाँ हामी ती कुनाहरू भेट्न गइरहेका छौं जुन राम्रोसँग हेर्न लायक छन्। चट्टानहरू र झरनाहरूको क्षेत्रहरू जसले यसको पानीमा डुबाउनको लागि ठाउँ छोड्दछ। ठाउँ अचम्मको र अनुपम छ, त्यसैले यसको पानीको तापक्रम जाँच गर्न लायक छ, जसले हामीलाई प्राकृतिक पार्कको क्षेत्रभित्रै राख्छ।
सान मिगुएलको केन्द्र
यदि हामीले ल्याण्डस्केपलाई एकातिर छोड्छौं र शहरको क्षेत्रमा प्रवेश गर्छौं भने हामी सान मिगुएललाई बिर्सन सक्दैनौं जुन एउटा मुख्य बुँदा हो। यिनीहरूलाई चिनिन्छ Portas दा Cidade। तिनीहरूको नामले संकेत गर्दछ कि तिनीहरू शहरमा स्वागतको रूपमा अवस्थित थिए। तीन खोलाहरू र यस पछाडि, एक घडी टावर। धेरै वर्ष पछि तिनीहरू अझै पनि व्यस्त क्षेत्रहरू मध्ये एक हुन्। यो सत्य हो कि अब तिनीहरू टाउन हल वर्गका नायकहरू हुन्।
Carapacho तातो स्प्रिंग्स
अब हामी टापु परिवर्तन गर्छौं र एउटालाई ग्रेसिओसा भनेर चिनिन्छ। यसमा, केहि तातो स्प्रिंग्स १ XNUMX औं शताब्दी देखि डेटि।। त्यस पछि उनीहरू सुरक्षित गरिएको छ र तपाईं तिनीहरूमा अर्को आरामदायी स्टप बनाउन सक्नुहुन्छ। किनभने त्यहाँ धेरै सर्किटहरू छन् आनन्दको लागि, केही उपचारहरू सबै पर्यटकहरूको लागि उपयुक्त छन्। समुन्द्रको धेरै नजिक भएको कारण यो साँचो हो कि हामीले न्यानो पानीहरू भेट्टायौं जुन उच्च तापक्रममा पुग्दछन्। यस्तो देखिन्छ कि यी सबैको लागि र उनीहरूसँग चिकित्सीय गुणहरू छन्।
Terceira टापु को राजधानी
यो यो तेस्रो नाम बोक्छ किनकि यो यसको स्थान हो पत्ता लगाइने ठाउँमा, अरुलाई सम्मानका साथ। ती १ kilometers किलोमिटर भन्दा बढी लामो २ by लामो छ। जबकि यसको उच्च पोइन्ट्स मध्ये एक सियरा डि सान्ता बरबरा हो, त्यहाँ तपाईंले ज्वालामुखीको अवशेष देख्नुहुनेछ। तर हामी फेरि सभ्यतामा जान चाहान्थ्यौं, यो भन्दा राजधानीको भ्रमण गर्नु भन्दा उत्तम उपाय नै। यो पछि नाम दिइएको छ Angra do Heroísmo। यस ठाउँमा एक पटक, तपाईंले मुख्य सडक मध्ये एक पैदल हिड्नुपर्नेछ जुन रिया दा सा हो, जहाँ तपाईं क्याथेड्रल पाउनुहुनेछ।
अवश्य पनि, यदि तपाईं टाउन हलको नजिक जान चाहानुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले प्लाआ वेल्हा जानु पर्छ। त्यहाँ, माथि उल्लेखित भवनको थपमा, तपाईं यो पनि देख्न सक्नुहुनेछ स्थान को सबै भन्दा व्यावसायिक क्षेत्र। यदि तपाईंसँग खाली समय छ भने, किनमेल पनि एक राम्रो विश्राम व्यायाम हो। यसको मध्य भागमा वा मुटुमा, तपाईंसँग अल्टो दा मेमोरियाको ओबेलिस्क र शहरको बीचमा ठूलो बगैंचामा पहुँच हुनेछ। Igreja da Misericordia बिर्सनु भएन, जुन अस्पताल र पछि एउटा कन्भेन्ट थियो।
इस्ला डे फ्लोरेसको झरना
हो, यो हामीले उल्लेख गर्नु पर्ने अर्को टापु हो। किनभने यसमा हामी प्रकृतिबाट आनन्द लिन फर्कन्छौं जुन हामीलाई धेरै प्रदान गर्दछ। यस अवस्थामा, यो एक झरना हो जुन तपाईं प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। किनकि यद्यपि हामीले सँधै त्यस्तो अनौंठो क्षण बाँचिरहेका सपनाहरू देख्छौं, अब तपाईं सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं एजोरेस टापुहरूमा के हेर्ने भनेर सोचिरहनुभएको थियो भने, हामीसँग तपाईंको लागि यो नयाँ उत्तर पहिले नै छ। मा फ्लोरस टापु तपाईं क्यास्काटा डो पोओओ डो बाकलहाउमा आउनुहुनेछ, झरना around ० मिटर जति एक झरना। हो, एक सपना साकार हुन्छ
फिएल टापुमा ज्वालामुखी
यो पहिलो पटक होइन जब हामीले नजिकको ज्वालामुखी र यस क्षेत्रमा उल्लेख गर्यौं। यस्तो देखिन्छ कि प्रकृतिले उनीहरूलाई मार्ग दिँदछ। तर यस अवस्थामा यो छ फियल टापु जसले सबैभन्दा धेरै प्रतीकात्मक स्थानहरूको अर्को योगदान गर्दछ। यद्यपि हामीले कुरा गरेको अरूले जस्तो भ्रमण नगरिएको हुन सक्छ, यो सत्य हो कि तपाईं झैं चकित हुनेछ। किनकि तपाईले यस्तो ठाउँ पाउनुहुनेछ जुन भावना दिन्छ कि यो एक ठाउँ हो। यस्तो देखिन्छ कि सम्पूर्ण ठाउँ the० को दशकमा विस्फोटको परिणाम हो। यहाँ तपाईं एक लाईटहाउस र दुबै दृष्टिकोण छन् तपाईंलाई खुशी पार्न। तपाई अरू के चाहानुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » अज़ोरेस टापुहरूमा के हेर्ने
युरोपका सब भन्दा सुन्दर शहरहरू